Contextual kutenga: chiitiko chitsva chekutenga | ECommerce nhau
Zvichida pakutanga iwe hauzive izvo zvinoumbwa uye zvinoreva izvo izvo zvinonzi kunotenga zvemukati chaizvo. Asi kana isu tikakuudza pazasi kuti hachisi chinhu chakaderera pane muenzaniso wakajeka wekushambadzira kwemamiriro, iwe unozotanga kufunga chimwe chinhu. Nekuti mukuita, iwo mukana chaiwo wekushandisa data renzvimbo yemutengi yekupa zvigadzirwa uye zvinopihwa kana iri muchitoro chemuviri pachayo kana pamberi pechimwe cheshambadziro dzayo. Icho chaicho chiitiko chitsva chekutenga.
Zvepamberi kutenga ndeye maitiro matsva mutsika yepamhepo kana yedhijitari yekushandisa iri kupararira nesimba guru kuburikidza nechikamu chikuru chenyika dzepasi. Chaizvoizvo ruzivo rwayo rwuri mune mupiro wedata renzvimbo. Kune izvo unofanira kupa mvumo zveichi chiito pane yako mbozhanhare kana kubva kune imwe tekinoroji chishandiso.
Ehezve, iri yekutengesa system inounza iwe zvakawanda zvakanaka zvinhu, asi zvakare nemamwe mimvuri mukuonekwa kwayo mumisika kutenderera pasirese. Tiri kuzokupa zvese izvi zvitupa zviratidzo kuti ugone Ongorora mashandiro ayo kubva zvino zvichienda mberi. Nekuti inogona kuve yekushandisa kukuru kwauri pane imwe nguva muhupenyu hwako.
1 Zvekare kutenga: ndezvipi zvakanakira?
2 Chiitiko chakasarudzika mukutenga pamhepo
3 Mashandisiro anoita pfungwa iyi kune vanotakura ruzivo
4 Iko kiyi iri munzvimbo
Zvekare kutenga: ndezvipi zvakanakira?
Imwe yemipiro yayo yakakosha ndeyekuti ine chekuita nekumiswa kwayo pawebhu peji yezvigadzirwa kana masevhisi aunopa panguva iyoyo. Zvakanaka, kutanga nezvazvo, zvakakosha kuti uzive kuti ino system iri yakabatanidzwa muwebsite yako, saka zvine chekuita nezvinodiwa nevatengi vako kana vashandisi. Asi iine hunhu hwakanyatsotsanangurwa uye izvo hazvisi zvimwe kunze kwekuti inoratidza kushambadza kwakabatana nemusoro wenyaya yako yedhijitari zvemukati.
Ndichiri kune rimwe divi, ino system yatiri kutaura nezvayo pasina mubvunzo ichakubatsira iwe kubva zvino kuwana rational balance pakati zvirimo uye nemhedzisiro dzavanogona kuburitsa aya marudzi eshambadziro. Kana mamiriro ekutenga achizivikanwa nechimwe chinhu pamusoro pedzimwe nzira dzekutengesa, imhaka yekuvimbika kwayo kwakanyanya mukuongorora matambudziko ako pamapeji ewebhu ehunyanzvi hwepamhepo basa.
Iwe unongo fanirwa kuziva kuti hongu kune mamwe mamodheru ari kupa mibairo yakanaka kwazvo, senge yekubatana kwekushambadzira kana kutengeswa kwezvigadzirwa. Naizvozvo, iwe chete unofanirwa kuongorora izvo zvakavhurika kwauri kubva kune ino yakasarudzika modhi yatiri kutaura nezvayo muchinyorwa chino. Iko kune nhevedzano yezvipo zvakamisikidzwa izvo izvo izvo isu zvatinokufumura iwe unotevera:
Izvo zvinodikanwa chete kuti uzive kuti kushambadzira kwemamiriro ezvinhu kune chinzvimbo chekuti kusvikira mwedzi mishoma yapfuura chaingova humbowo. Asi izvi hazvichisiri izvo, uye yatove chikamu chetsika yevatengi vazhinji kana vashandisi. Kusvika padanho rekuti rave remhando mune zvimwe zviitiko zvakakosha zvachose mune ino yekutengesa maitiro. Kubudikidza neshanduko diki iyo yauya kuzogara muInternet chikamu chekutenga.
Chiitiko chakasarudzika mukutenga pamhepo
Iko hakuna kupokana kuti iyo yazvino data yatinogona kufunga nezvayo yekutenga mamiriro: chiitiko chitsva chekutenga. Ichi chirevo chisina anopokana nacho zvakare. Asi chero zvakadaro, isu tichaongorora zvinokurudzira yatakasvika pane ino inoshamisa uye yakakosha danho. Tichifunga nezvezvakakosha zvakanyanya mumhando iyi yekutenga uye ndidzo dzinozopedzisira dzatipa tsananguro nezvehunhu hwavo mukushandisa pasirese. Iwe unoda kuvaziva here kuti vatore imwe yemhedziso yako pachako?
Iyo inzira ine hunyanzvi uye yepakutanga yekugadzirisa mapeji ewebhu ezvitoro zvepamhepo kubva kushambadziro uye zvemukati-maonero maonero.
Zvepamberi kutenga zvinosanganisira imwe nzira yekumutsa kufarira pakati pevatengi uye nenyaya yekuti vanogona kumisikidza maodha avo nenzira yakazara uye kwete mune yakasarudzika maitiro.
Imwe yemashandisirwo ayo makuru ndeyekuti inoshanda senge inoshanda gwara kune mushanyi kana mushandisi kutsvaga chigadzirwa kana sevhisi inovafarira chaizvo. Chaizvoizvo kugovera vamwe vamiririri mune ino yekutengeserana maitiro.
Kana paine chimwe chinhu chinoratidzira maitiro azvino kana pfungwa, hachisi chimwe kunze kweicho chinogona kusanganisa kutenga kweInternet mune zvakajairwa zviitiko zvevatengi.
Uye hazvigone kukanganwika kuti iyi nzira yekutengesa inobvumidza kusangana kukuru kwevashandisi. Kusvika padanho rekuti mukati nepakati kana kwenguva refu zvinonetsa kuti vabve nepfungwa iyi yemazuvano.
Mashandisiro anoita pfungwa iyi kune vanotakura ruzivo
Mukutenga kwemamiriro ezvinhu pane nzvimbo yezvinhu zviviri zvehunyanzvi uye chiitiko chinoitwa kuburikidza nehukama hwehukama. Iko hakuna zviripo zvipingamupinyi pakuiisa mukuita uye kuongorora kwayo mhedzisiro zvishoma nezvishoma. Kunyangwe ichangoburwa inouya kubva kunesocial network munzira ye Instagram uko mhedzisiro yeimwe nzira yekutengesa yatinozoshandisa kubva panguva dzino chaidzo inogona kukwidziridzwa.
Muzviitiko zvese, izvo zvinonzi zvekutenga zvemukati zvinogona kuitiswa kubva kutsigiro dzakasiyana dziri paruoko rweavo vanobatanidzwa mune ino yakasarudzika maitiro. Iye zvino tava kuzoona zvimwe zvakakosha zvakanyanya kuti iwe ugone kuzviisa mukushandisa chero nguva. Nechinangwa chekusimudzira rako redhijitari bhizinesi kubva kune iyi mhando yekuita mune ino chikamu. Iwe unoda here kuziva mamwe eaya ari kuita kwakanyanya kukanganisa pamusika? Zvakanaka, teerera nekuti zvinogona kuve zvekushandisa kukuru kwauri mune imwe nguva yebasa rako rehunyanzvi.
Kubva pane zvigadzirwa zvehunyanzvi zvechero hunhu. Izvo zvinongodiwa chete kuisa nzira dzekupinda dzeiyi nzira yekutengesa. Inogona kuitiswa kubva kune yakajairika nhare mbozha kuenda kune epamusoro mamodheru anotakura eazvino ruzivo ruzivo.
Kubva chero blog rinopa zvimwe zvemhando yepamusoro zvemukati uye kuti ivo vanofanirwa kusvika kune vakawanda kwazvo vanhu. Kubudikidza nemusoro wenyaya unokwezva vatengi kana vashandisi kuburikidza neshoko rinokanganisa uye iro rakanyatsogadzirirwa.
Kubudikidza ne hukama hunoshandiswa nevashandisi kubva kune makuru masocial network uye ane degree rekupinda rinogona kunge rakakwirira kupfuura mamwe mafomati. Asi mune ino kesi, kuteedzera akateedzana ehunhu hunhu hunovasiyanisa kubva kune mamwe masisitimu ane mabhenefiti akafanana.
Iko kiyi iri munzvimbo
Asi kana paine chimwe chinhu chinomira kunze mukutenga kwechinhu pamusoro pezvose kune basa rakakodzera rinoitwa ne geolocation. Iyi sefa inoisa vatengi muzvidimbu zvakasiyana muhukama hwavo nekambani yaunomiririra panguva ino. Kusvikira pakuti zvakafanira kuti vanhu ava vave nazvo zvigadzirwa zvetekinoroji kwavanogona kuzivikanwa.
Izvi ndizvo chaizvo zvezvimwe zvinounzwa nemamiriro ekunze ekutenga uye izvo zvinoda kushandiswa mune yezvekutengesa nzira yekirasi iyi yemakambani. Iko kumagumo chinangwa ndechekubvisa chero chipingaidzo pakati pemutengi nemutengesi. Uye iyo nzira yayo yekusimudzira pakupera kwezuva. Nepo kune rimwe divi, zvisina kukosha zvakadaro inyaya yekuti inogona kuve iri chairo bhizinesi mukana kana iwe uchiziva maneja maitiro aya chaizvo.
Hazvishamisi kuti, chimwe chekurudziro yekuisa mamiriro ekutenga mukuita ndeyekubatsira iwe kugadzirisa maitiro ekutengesa. Hapana chimwe uye hapana zvishoma. Kunge mamwe masisitimu ane akafanana maitiro uye ayo anoshandiswa kushandiswa mune aya akasarudzika mamiriro. Zvakare nekukurudzira mutengi kana vashandisi kuti vave vanonyanya kugashira matekiniki aya atiri kutaura nezvazvo muchinyorwa chino.
Semuenzaniso, uye kuti iwe unzwisise zvirinani maitiro aya, iwe unofanirwa kuziva kuti iwe unogona kuishandisa kubva kune akakosha maforamu maforamu. Semuenzaniso, neFacebook kana Twitter, pakati pevamwe vanozivikanwa neveruzhinji. Munzira ipi? Unozvibvunza iwe izvozvi. Zvakanaka, kuburikidza nechiito chakadzokororwa sekujairana nemaitiro matsva uye chimwe chezvakanyanya kukosha mune izvi kuisa mabhatani ekutenga akananga pawebhusaiti yechitoro chako chaicho.
Ehezve, ivo vanozokubatsira iwe kuvandudza kushambadzira kwezvako zvigadzirwa, masevhisi kana zvinyorwa. Nenzira yakasiyana, asi inozivikanwa nekushanda kwayo kukuru uye kugadzirisa. Uyezve, iri zano rakareruka kuisa mukuita uye izvo zvinogona kukupa unopfuura mufaro mumwe kubva panguva dzino. Nekuti iwe unofanirwa kuziva kuti hazvizi zvega nezve enda zvishoma kupfuura izvo zvemagariro zvekutengeserana, asi pane izvo zvinokanganisa sarudzo yekutenga yauchazoita chero nguva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Contextual kutenga: chiitiko chitsva chekutenga
Kuita munhu mubhizinesi redhijitari